Dab xoogan oo qabsaday mid ka mid ah kaamamka qaxootiga ee magaalada Buuhoodle, gobolka Cayn. – Radio Daljir
Buuhoodle, Feb 03 – Dabka ayaa qabsaday mid kamid ah kaamaka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn; kaasi oo khasaare gaadhsiiyey qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee degan kaamkan oo ku dhexyaala xaafada Suweeto ee magaalada Buuhoodle.
Dabkan ayaa xiligii uu dhacay waxaa u gurmadey shacab aad u tira badan, hase ahaatee, kuma aysan guulaysan in ay badbaadiyaan guryaha dabku qabsaday oo ka samaysnaa nooca loo yaqaano buushashka.
Khasaaraha dabku geystey ayaa ahaa ku dhowaad 10 guri oo isgu jira buushash iyo carshaan ay deganaayeen dad barakacayaal ah kuwaasoo kasoo qaxay dagaalada ka taagan koonfurta Somaliya mudada 20 ka sano ah.
Xiligii dabku dhacay ayaanu booqasho ku tagnay goobtii dabku ka kacay halkaasoo aanu kula kulanay qaar ka mid ah dakii guryahooda ku waayey dabka, kuwaasoo idaacada Daljir uga warbixyey sida wax u dhaceen.
Ugu horayn, waxaan halkaasi kula kulmay haweeney gurigeedu ka mid ahaa guryihii gubtey oo lagu magacaabo Faadumo Cabdi; Faadumo Waxaa ay tilmaantay in khasaare lixaad leh oo dhanka guriga ahi ka soo gaadhey dabka, sidoo kale waxaan isla goobta kula kulmay Maxamed Aadan Maxamed, oo isna ka mid ahaa dadkii khasaaruhu soo gaadhey; Maxamed ayaa sheegay in aysan u badbaadin habayaratee wax agab ah, oo reerku ku shaqaystaan.
Ma aha markii ugu horeysey oo dab kan la mid ah ka dhaco magaalada Buuhoodle; hada ka hor waxaa ku gubtey magaalada guryo filo ah, kuwaasoo badidoodu shufbeeleen, kadib markii la waayey cid u gurmata, iyadoo magaaladu aysan lahayn dabdamis.
Isku soo wada duuboo, dadkii ku waxyeeloobey dabkan ka kacay xaafada Suweeto ee magaalada Buuhoodle ayaan haysan meel ay u hoydaan, iyagoo dadka muslimiinta ahna ka codsatay in ay u fidiyaan gacan taageero.
Khadar Cawil Ismaaciil